Nhau - Sodium Hypochlorite inogadzira muchina wekudzivirira COVID-19
Idzo dhata dzazvino dzakaburitswa neUS Centers for Disease Control and Prevention pa5th yakaratidza kuti 106,537 mitsva yakasimbiswa mhaka dzakataurwa muUnited States musi wa4, ichiisa nyowani yepamusoro munhamba yezviitiko zvitsva muzuva rimwe chete munyika yepasirese . Dhata inoratidza kuti avhareji nhamba yemakesi matsva muzuva rimwe chete muUnited States mumazuva manomwe apfuura yasvika vangangoita makumi mapfumbamwe, iyo yakamisazve rekodhi yenhamba yepamusoro kwazvo yezviitiko zvitsva muzuva rimwe mumazuva manomwe kubvira kunyuka nekupararira. Pakanga paine 1,141 nyowani yekufa pa4th, yakakwira kwazvo kubvira pakati paGunyana. Kuputika kwechangobva kuitika muUnited States kwakadzikira zvakanyanya, nezviratidzo zvakakosha senge huwandu hwevachangobva kusimbiswa kesi, huwandu hwevachipatara, uye huwandu hwakanaka hwekuyedzwa hutachiona kuenderera nekuisa zvinyorwa zvitsva. Kuwedzera kwezviitiko zvitsva hakukonzerwi nekuwedzera kwekuyedzwa. Kunyangwe iyo nhamba yemiyedzo iri kuwedzerawo, iko kuwedzera kuri kushoma kwazvo kupfuura kuwedzera kwenhamba yematare akasimbiswa.
Nemamiriro ezvinhu aya, iyo sodium hypochlorite solution disinfection mumiriri ichave iri yakawanda uye nekukurumidza inoda nenzvimbo dzakasiyana.
Kune mumwe mutengi anobva kuAmerica akarayira seti imwe yemakumi matatu nemazana matatu emvura / zuva 6% sodium hypochlorite inogadzira muchina kubva kukambani yedu, kusangana nezvinodiwa mumusika muAmerica. Dhizaini, kunyepa, kusangana uye kutumwa kwemidziyo yatopedza uye yakagadzirira kuendesa izvozvi.
Iyo inogadziriswa sodium solution inogona kushandiswa pakuuraya hutachiona mumugwagwa, supamaketi, kumba, chipatara, zvivakwa, mvura yekunwa, nezvimwewo kuuraya hutachiona uye kudzivirira kuwedzera kweye convid-19.
Isu tichabatsira mutengi kuisa michina uye kubatsira mutengi kutanga kugadzira iyo inomhanya mhanyisa uye kuwana musika wekutengesa nekukurumidza sezvazvinogona.
Nemamiriro azvino e CONVID-19, sodium hypochlorite inogadzira muchina inodikanwa nenyika zhinji.
Ro Zvakanaka Mvura Kuchenesa Sefa, Ro Desalination Maitiro, Sodium Hypochlorite System Dhizaini, Mvura Yegungwa Kumvura Yekunwa Machine, Ro Mvura Sefa Spare Zvikamu, Nyanzvi Yemvura Yekuchenesa System,